गुराँस लाइफको ५० प्रतिशत हकप्रद विहिबारदेखि, कहाँ – कहाँबाट भर्न पाइन्छ ? - Aarthiknews
गुराँस लाइफको ५० प्रतिशत हकप्रद विहिबारदेखि, कहाँ – कहाँबाट भर्न पाइन्छ ?
गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सको ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर भर्नलाई भालि विहिबारदेखि खुला हुनेभएको छ । कम्पनीले हाल कायम चुक्तापूँजी ५९ करोड ४० लाख रुपैयाँको आधारमा २९ लाख ७० हजार कित्ता हकप्रद विक्री गर्न लागेको हो ।
हकप्रद पश्चात कम्पनीको चुक्तापूँजी ८९ करोड १० लाख रुपैयाँ पुग्नेछ । जेठ ८ गतेसम्म विक्रीमा रहने यस हकप्रदमा कात्तिक २६ गतेसम्म कायम सदस्यहरुले आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले हकप्रद प्रयोजनका लागि कात्तिक २७ गते बुक क्लोज गरेको हो ।
हकप्रदमा योग्य आवेदकले लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट लिमिटेड, लक्ष्मी बैंक लिमिटेडका उपत्यका भित्रका ललितपुर , महाराजगञ्ज र वाहिरका विरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा, पोखरा, नारायणगढ, नेपालगञ्ज, धनगढी, जनकपुर, इटहरी, दमक, धरान, लहान, स्याङ्जा, सुर्खेत, दाङ, महोत्तरी, सल्यान, दोलखा, काभ्रेपलाञ्चोक, तनहु र मकवानपुरका शाखाकार्यालयबाट आवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ । साथै सि—आस्वा सदस्यता लिएक बैंक तथा वित्तीय संस्टथाबाट सि—आस्वा प्रणालीमार्फत पनि शेयर भर्न सकिने व्यवस्था छ ।
५० प्रतिशत हकप्रद जारी गर्न लागेको कम्पनीको सो हकप्रद र ८ प्रतिशत बोनस पश्चात ९६ करोड २२ लाख ८० हजार रुपैयाँ चुक्तापूँजी पुग्नेछ । सो पूँजीको आधारमा कम्पनीले शतप्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने निर्णय गरेको हुदाँ शतप्रतिशत हकप्रद पश्चात भने कम्पनीको पूँजी १ अर्ब ९२ करोड ४५ लाख ६० हजार रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ ।
शेयर बजारमा क्रमश : सुधार
स्वावलम्बनले बोलायो साधारण सभा, लाभांश पारित गर्दै